Snapchat na-etinye ihu ọhụrụ na emoticons, gịnị ka ha pụtara? | Akụkọ akụrụngwa
A na-emelite Snapchat na mmelite na-adọrọ mmasị
Pablo Aparicio | | Mobiles, Noticias, Netwọk mmekọrịta
Ozugbo na «nzuzo» Izi ozi ngwa Snapchat ka emelitere nwere mmelite mara mma, n'etiti ha anyị na-ahụ baajị ọhụụ ka anyị wee mata kọntaktị anyị nke ọma, ngalaba ọhụrụ akpọrọ "edshụnanya Dị Mkpa" na ọnọdụ abalị maka igwefoto.
Snapchat anọwo na-arụ ọrụ siri ike n'oge na-adịbeghị anya, na-amalite site na mgbe a chọrọ ka ọ gbochie ndị ahịa nke atọ nke mebiri na Snapchat amara nke inwe ike ịkwụsị ịchịkwa ihe ị na-eziga, ma nkata na faịlụ multimedia na-enye ohere (ma ọ bụ kwe) ịzọpụta ndị a faịlụ na ọbụna mkparịta ụka akụkọ ihe mere eme.
1 Pụtara nke Snapchat emoticons
2 Ihu ọchị
3 Ihu ọchị
4 Ihu na ugogbe anya maka anwụ
5 Obere ihu na-ele anya na akụkụ
6 Obi ọla edo
8 Ihe ọhụrụ ndị ọzọ nke Snapchat update
Pụtara nke Snapchat emoticons
Snapchat malitere igbochi ndị ahịa nke atọ ogologo oge gara aga, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị mma. Ikekwe iji kwụọ ụgwọ maka mmeghari a, emelitere ngwa a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ gara aga site na akụkọ na-atọ ụtọ. N'ime akwụkwọ akụkọ ndị a, ikekwe enwere otu nke dị iche karịa ndị ọzọ: ụfọdụ ọchị ọhụrụ na Snapchat dị ka emoji nke na-apụta n'akụkụ preview chats. Ma gịnị ka obere ihu ndị a na akara ndị ọzọ pụtara? Ọfọn, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ na ị ma ha ma mara ihe ha pụtara, anyị ga-akọwara gị ya n'okpuru.
Ọ bụrụ na anyị ahụ ihu ọchị na-esote otu n’ime kọntaktị anyị, ọ pụtara na kọntaktị a bụ otu ezigbo ndị enyi anyị na Snapchat, ma ọ bụghị nke kachasị mma. Ebe ọ bụ naanị otu ebe ka echebere maka nke kachasị mma, enyi a nwere ike ịbụ nke abụọ, nke atọ ma ọ bụ karịa, mana, belụsọ na anyị gara n'ihu na-akparịta ụka na ya ma gbanwee akara ngosi ya na obi ọla edo, ọ bụghị ya kacha mma .
Na Snapchat anyị nwere ụdị ihu abụọ na-amụmụ ọnụ ọchị: nke nwere uche karịa nke naanị ọnụ ya gbagọrọ agbagọ na anya mechiri emechi na onye ọzọ na-ekwupụta anya na-emeghe na nke ezé na-ahụ anya. Ọ bụrụ na anyị ahụ nke abụọ a na-amụmụ ọnụ ọchị ndị a n'elu otu n'ime kọntaktị anyị, ọ pụtara na ezigbo enyi anyi no na 1 bu ezigbo enyi ya 1.
Ọ bụghị ihu kachasị mfe ịhụ, ebe ọ bụrụ na m nwere enyi aha ya bụ Vicente dị ka ezigbo enyi m nke mbụ, Vicente ga-abụkwa ezigbo enyi enyi nke atọ aha ya bụ Andrés, ya mere Vicente kwesịrị inwe ezigbo ndị enyi abụọ kacha mma 1.
Ihu na ugogbe anya maka anwụ
Ọ bụrụ na anyị ahụ ihu na ugogbe anya maka anwụ n'akụkụ otu n'ime kọntaktị anyị, ọ pụtaghị na kọntaktị a nọ na mpaghara ebe anwụ na-acha, ọ dịghị. Ihe ọ pụtara bụ na otu ezigbo ndị enyi anyị bụ otu n’ime ezigbo ndị enyi ya. Dịka ọmụmaatụ, enwere m kọntaktị aha ya bụ Pepe bụ otu n'ime ezigbo ndị enyi m (ọ nwere ike ịbụ onye kachasị mma, mana ọ bụghị ma ọ bụrụ na enyi ahụ kachasị mma, ha nwekwara akara ngosi ọzọ). Enwere m enyi ọzọ na Snapchat aha ya bụ José. Ọfọn, ọ bụrụ na Pepe bụ otu n'ime ezigbo ndị enyi José, m ga-ahụ emoji nke ihu na ugogbe anya maka anwụ na mkparịta ụka José, José ga-ahụ emoji nke ihu ya na ugogbe anya anwụ n'elu nkata m na Pepe enweghị ike ịhụ akara ngosi ọ bụla ma ọ bụ hụ onye nwere nkụja n'akụkụ, nke anyị ga-akọwakwa ihe ọ pụtara mgbe e mesịrị.
Obere ihu na-ele anya na akụkụ
A na-eji emoji a n'ọtụtụ ebe n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche. O nwere ike ịpụta ihe dịka "Ahụla m gị", ọ nwere ike ịpụta "ee, ee ..." ma ọ bụ ọbụlagodi na ị masịrị onye ị na-ezigara ya. N'ụzọ dị mma, na Snapchat ihe ọ pụtara doro anya: ọ bụrụ na anyị ahụ ihu na-ele anya n'akụkụ n'akụkụ otu n'ime kọntaktị anyị, ọ pụtara na anyị bụ ezigbo enyi gị, mana ọ bụghị nke anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mụ na Pepa enyi m kwurịtara ọtụtụ okwu na Pepa anaghị eso onye ọzọ Snapchatted, anyị ga-abụ otu ezigbo ndị enyi ya. Mana ọ bụrụ na anyị na onye ọzọ ejiri Snapchatted karịa, anyị ga-enwe enyi ọzọ ma ọ bụ ezigbo enyi. N'okwu a, anyị ga-ahụ ihu nke na-ele ka nkata Pepa na Pepa ga-ahụ ihu ọchị.
Obi ọla edo
Ọ bụrụ na anyị ahụ obi ọla edo na nkata nke otu kọntaktị anyị, a na-eche na anyị nwere ezigbo mmekọrịta na Snapchat na onye ahụ. Obi ọla edo pụtara na anyị anyị bụ ezigbo enyi gị 1 na onye ahụ bụ ezigbo enyi anyị 1. Ha na-ekwu na onye ọ bụla nwere enyi nwere akụ, nri? Ọfọn, akụ ahụ na-anọchi anya na Snapchat na ọla edo obi emoji.
El ọkụ akara ngosi Anyị nwere ike ikwu site na iji okwu Anglo-Saxon na n'oge a anyị "na-ere ọkụ" na onye ahụ. N'egwuregwu dị ka basketball, ọkachasị ọ bụrụ na ọ bụ NBA n'ihi na a na-egwu ya na mba na-asụ bekee, mgbe onye ọkpụkpọ gbara egbe ọtụtụ oge n'usoro na akara, a sịrị na ọ "na-agba ọkụ", onye ntụgharị ya bụ "na" mana anyị ga - eji okwu ọzọ "plugged in". Na Snapchat, ọ bụrụ na anyị ahụ ire ọkụ n'elu nkata nke otu kọntaktị anyị, ọ pụtara na anyị "abanyela" na kọntaktị ahụ, n'echiche na anyị na-na na snapchatting na ya (ozi zitere na natara) n'oge ọtụtụ ụbọchị sochiri. N’ụzọ ezi uche dị na ya, dị ka streaks niile, ire ọkụ ga-apụ ma ọ bụrụ na anyị akwụsị ịkpọtụrụ onye ahụ.
Ihe ọhụrụ ndị ọzọ nke Snapchat update
Na mgbakwunye na akara Snapchat ndị anyị kpọtụrụ aha, enwekwara mmelite na igwefoto na nke ahụ bụ ugbu a mpekere onwa akara ngosi na-esote flash mgba ọkụ, ịpị ya ga-eme ka igwefoto anyị bulie uche ISO ka ijide dokwuo anya foto na ọnọdụ ọkụ dị ala, ọ bụ ezie na anyị ga-ama na nke a na-eduga na nfu nke mma na nsonaazụ, na-ahapụ mkpọtụ karịa na onyonyo a:
N’ikpeazụ anyị ga-enwe ngalaba ọhụụ akpọrọ «Ha chọrọ ịhụnanya» nke kọntaktị ga-egosi onye anyị ji zigara ọnyà mana maka ebumnuche ọ bụla anyị kwụsịrị ime ya.
N'etiti nke a na Snapchat ọhụrụ ọhụrụ maka igbochi ojiji nke-atọ ndị ọzọ ngwa ma si otú a zere na nzuzo nke ndị ọrụ ya na-emebi, ngwa ahụ na ọrụ ahụ na-eme ezi ihe, yana ha abụrụlarị ihe ịga nke ọma n'ihe gbasara izipu foto, n'adịghị ka Whastapp, ndị a maara na ịnọ n'elu gụnyere nnukwu ibu ọrụ, ha na-arụkwa ọrụ na njirimara ọhụụ na-agba anyị ume ka anyị nọgide na-eji ngwa ha, atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere ndị ewepụtara na nso nso a, dịka ngalaba «Chọpụta», ebe anyị nwere ike ịhụ obere akụkọ sitere na channelụ ndị amata n'ụwa niile dịka National Geographic.
Banyere iji ngwa ndị ọzọ, onye ọ bụla na-anwale ya ugbu a, ọ ga-abụ na ha ga-enweta njehie na-ekwu na ọ nwebeghị ike ijikọ sava ahụ, ọ bụrụ na ịnataghị ya ọ bụ naanị okwu nke oge, Snapchat na-akagbu ohere nke sava ha site na ụdị ngwa a na-akwadoghị, nke na-abara anyị uru nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na e bipụtara ozi NSA, anyị na-arịwanye elu ndị ọrụ na-elekwu anya na nzuzo anyị. Banyere ngwa izi ozi, ọ bụ ezie na WhatsApp gara n'ihu na-achịkwa ahịa a, anyị na-achọkwa nhọrọ ndị na-ekwe anyị nkwa (ọ bụ ezie na ha nwere ike ghaara anyị ụgha) ogo nzuzo dị ukwuu, dị ka Telegram, otu n'ime ngwa kachasị nchebe dị maka ikpo okwu ọ bụla, ma ọ bụ Snapchat, ngwa ọzọ echekwara echekwa na-enyekwa anyị ọrụ na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » A na-emelite Snapchat na mmelite na-adọrọ mmasị
Ndị ọrụ Windows Phone na-erite uru dị ukwuu site na igbochi ngwa ndị ọzọ, karịsịa n'ihi nhọrọ ha na-enye anyị n'ihu ọha, nke bụ Ọ BONEGH and ma ghara ịga nkwupụta nkwado ọ bụla. Ihere na enweghị aka ọrụ. Enweghị onye isi ọ bụla kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ ya mechie ahịa, yana obere nke ndị ọrụ na-eti maka ya.
Zaghachi ka erik
Akụkụ dị n'akụkụ ihu nwere ike ịbụ na onye ahụ ị nwere ị ga - enweta obi ọla edo! J
Akụkụ dị n'akụkụ pụtara na onye ahụ nwere gị dịka ezigbo ndị enyi ma ị nweghị ya!
Kedu ihe kpatara nọmba ji esote emoticons?
Ekwenyere m, dị ka Ana na-ekwu, na n'akụkụ ihu bụ onye nwere gị dịka ezigbo ndị enyi na ị nweghị.
Dị ka m si kwuo, ihu dị n'akụkụ bụ mgbe ị na-ewere ụfọdụ nseta ihuenyo nke onye nke ọzọ ...
Kedu ihe nọmba ahụ pụtara?
Ihu nke na-ele ya anya n’akụkụ pụtara na ị bụ ezigbo enyi ya ma ọ bụghị nke gị !!!
nọmba ndị pụtara
Kedu ihe obere ihu na-egosi akụkụ ezé abụọ ahụ pụtara ????? <—— esaaa !!
Ihu nke ???? Kedu ihe ọ pụtara?
Kedu ihe ihu na-acha ọcha pụtara?
Ihu na-ele anya n’akụkụ pụtara na onye ahụ nwere gị n’etiti ndị ọkacha mmasị ya mana ị nweghị onye ahụ n’etiti ndị ọkacha mmasị gị
Ana m ekele gị nke ukwuu maka mmekorita gị, emelitere m ntinye dabere n'eziokwu na enwere ọtụtụ ndị dabara na ihe ọ pụtara, nke mere ka m kwenye na ọ bụ eziokwu (na dịka m hụworo na ọ bụ eziokwu na ndụ n'ezie, ya mere kwenye).
N'ikpeazụ, ahụrụ m na ị na-ajụ maka ihu ọhụrụ, nke bụ eziokwu bụ na ahụghị m ha, ọ bụrụ na ị nwere ike bipute nseta ihuenyo m ga-amalite nyocha banyere ya, echefula ịkekọrịta isiokwu ahụ, ọ bụghị maka ihe efu, mana n'ihi Abụ m onye mbụ Ozugbo m hụrụ ha na m furu efu, nke a nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịmata ihe okwu a bụ, ekele ndị na-agụ akwụkwọ niile na-eme ka ọrụ anyị kwe omume! 😀
Achọrọ m ịde foto gbasara ihu m nwere obi abụọ ma enweghị m ike ma ọ bụ amaghị etu esi ebipụta ya
I meela nke ukwuu maka ịchọ inye aka ^^ ka bulite foto ị nwere ike bulite ya na "http://www.imgur.com/" wee mechaa ziga njikọ na ya ebe a, jisie!
Kedu ihe ọnụọgụgụ pụtara ?????
Anaghị m enweta ọnwa n'ihi na vidiyo na-agba ọchịchịrị na-enweghị m chọrọ
Maka ndị na-ajụ maka ihu na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-achapụ ya pụtara na onye ahụ bụ ezigbo ezigbo enyi gị 🙂
Enwere m ọkụ
Zaghachi Kellymar Perez Ramirez
Kedu ihe ọnụọgụgụ pụtara ???
Onwere onye ma ihe ihu a di na nnuku?
Mmadụ enwere ike ịkọ ihe ọnụọgụgụ pụtara?
Obere ihu nke eze? pụtara na ha nwere ezigbo ezigbo enyi # 1
? ha abụọ bụ # 1 nke ọzọ
? ha nwere # 1 otu onye
? Ha bụ ezigbo ndị enyi
? ịkọrọ ezigbo enyi
? ị nọ na ezigbo ndị enyi ya ma ọ nọghị na nke gị
? ha snap nkata mgbe
Kedu ka m ga esi eme ka onwa mpekere onwa na-enwu gbaa? Mmadu agwa m otu m g’eme ya!?
Kedu ka m ga - esi mee ihe ọkara luma na - ejide m na snapchat.
Nọmba ahụ ga-abụ ụbọchị ị na-arụsi ọrụ ike na-ekwu okwu ... nke ahụ mere ha ji pụta n'akụkụ ọkụ 😉
Kedu ihe mkparịta ụka isi awọ na-apụta?
Na obi na-acha ọbara ọbara?
Ugbokodo 89 dijo
Kedu ihe kpatara na mpepepepe emepe adịghị apụta n'akụkụ ọkụ na snapchat m?
Gịnị ka nọmba ahụ pụtara?
Lee anya na Smileys Plus ngwa ị ga - ahụ xl emoticons, ihu, zute smileys, troll na ndị ọzọ; O nweere onwe ya ibudata ya na google play store, Obi dị m ụtọ na arụnyere ya na ekwentị m. M na-eziga xl emoticons na mkparịta ụka mmekọrịta ọ bụla na ekwentị mkpanaka m; M na-ahapụ njikọ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smileys.plus
Zaghachi JoHanna Alava Carranza
Wantchọrọ ka emoticons ọhụrụ kesaa, ị ga-achọ ngwa a, budata ya n'efu na google play, ọ dị mma ịkọrọ ndị enyi gị na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla, nkata na ngwa ndị ọzọ; Onweghi oke onu ogugu ochi na emoticons, gbalia ya n’ezie na ichoro ya dika m
Zaghachi Sonia Cedenilla Pablos
Onwere onye mara ihe akara ngosi nke di na agba ocha ??
Onwere onye ma ihe akara ngosi ozi ezigara putara ma na agba oji?
Are bụ onye na-anya ụgbọ ala gị, ọ bụghị GPS
Anyị lebara ọganihu nke Project Spartan